.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Format Factory ဖြင့် သီချင်း size သေးအောင်လုပ်နည်း
Format Factory ဖြင့် သီချင်း size သေးအောင်လုပ်နည်း
သူငယ်ချင်းတို့ flashsongလုပ်တဲ့အခါမှာ သီချင်းကို size သေးအောင် ချုံ့ချင်ရင်
ဒီ format factory software လေးက ကောင်းပါတယ်။
သီချင်းချုံ့နည်းကတော့ format factory ကိုဖွင့်ပြီး
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း all to mp3 ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ add file ကိုထပ်နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် click to start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပုံမှာမျှားပြထားတဲ့ နေရာကိုနှိပ်ပြီး မိမိပြောင်းထားတဲ့သီချင်းကိုရှာလို့ရပါတယ်။
Posted by FlashSongCrazy at 05:46